Iindaba - Luhlobo luni lwezibuko zelanga ozifuna ukunxiba ikamva?
Luhlobo luni lwezibuko zelanga ozifuna ukunxiba ikamva?
Zeziphi iintlobo zelanga ozifuna ukunxiba kwikamva?
Kudala-dala, sonke sasivakalelwa kukuba amantombazana amakhulu enxibe iiglasi ayengama-nerds, evakalelwa kukuba buthuntu kwaye engenangqondo. Nangona kunjalo, kule minyaka idlulileyo, uninzi lweemveliso eziphambili zeflyover ziyazixhasa, kwaye iiglasi ezingathandwayo ngumntu wonke ngequbuliso zaba zizinto zefashoni kwaye zaba yinto entsha.
Amantombazana amane anamehlo ayedla ngokunxiba iiglasi egxile kuphela ekusebenzeni, kodwa ngoku bajolise ngakumbi kuyilo lwesitayile. Bade baxhobise iindidi ezahlukeneyo zeglasi ekhaya ukuze batshatise izimbo zemihla ngemihla.
Olu hlobo lwe-geek chic luye lwaziswa ukusuka ngo-2019 ukuya ku-2020.
Ngapha koko, okoko nje ukuba izixhobo zikhethwe kakuhle, ziya kuthi ngokwendalo zongeze amanqaku kwinkangeleko. Ke ngoko, njengentombazana enemfashini, kufuneka uqale ufunde ukukhetha isakhelo esifanelekileyo.
Ukuba abantu bayayiqonda itekhnoloji ye-hibernation kwinoveli yesayensi "Umzimba omithathu", zeziphi iindondo zelanga ofuna ukuzinxiba kwikamva?
Luhlobo luni lwezibuko zelanga ezingasayi kuqheleka nakwikamva, zihlala zikhokela umkhwa, nangaphaya kwamaxesha?
Kutshanje, zimbini iifilimu ezibalaseleyo zesayensi, "iBlade Runner 2049" kunye ne "Ready Player One". Zombini ezi bhanyabhanya zichaza "ilizwe elizayo", kodwa ilizwe elizayo eliboniswe kwezi bhanyabhanya zimbini zahluke ngokupheleleyo. ye.
Kwihlabathi le "Player Ready One", abantu baxhomekeke ngokupheleleyo kumava aphezulu aziswe yiVR ephezulu.
Ihlabathi kwi "Blade Runner 2049" linxilile kwaye liyinkangala, kwaye ubuchwepheshe obunamandla onke buye bandisa ubulolo bomntu. Ezona zibuko zelanga zexesha elizayo esizazisa kuwe, i-avant-garde luphawu lwayo.
Kwimiboniso bhanyabhanya ye-cyberpunk kunye nomabonwakude, ilizwe elizayo lihlala liphazamiseka. Kwixesha elizayo isixeko esine skyscrapers kwaye sithambekele ekubeni ngamacala amathathu, kukwakho nenani elikhulu labahlali abakumgangatho ophantsi kunye nemida yentlalontle ehlala kwizitalato ezixineneyo. Itekhnoloji ethe xhaxhe, izibane ezintle ze-neon kunye nabantu abancinci, uthando oluthambileyo, intiyo kunye nentiyo zihluke kakhulu.
Imibala emihle yinto ebalulekileyo ye-cyberpunk. Xa ujongene netekhnoloji ebandayo, imibala ibonisa iimvakalelo ezintle kunye nezityebi zabantu. I-DLL5333 iqulethe izakhelo zentsimbi ezintle kunye neelensi ezimnyama ezimfusa, kwaye imibala emihle ayilibaleki.
Isakhelo esikhulu seglasi yeglasi enencasa ye-retro yee-80s ibuyile kwakhona. Ukongeza kwimvakalelo yokudlala kunye nenhle, iiglasi zekati zinesiphumo sokuguqula ulwandlalo. UStella mccartney ugqitywe ngakumbi ngeepateni zeenkwenkwezi. Uyilo lutsala amehlo kwaye ngokuqinisekileyo lunokuba yinto ebonakalayo kubume. Ukuba ucinga ukuba iiglasi ze-monochromatic zixhaphake kakhulu, unokukhetha iiglasi ze-tortoiseshell. Iiglasi zeTortoiseshell bezisoloko zilukhetho lobunewunewu obucekeceke, kodwa zinokuqaqambisa ubume bobugcisa. Iiglasi zegama elifanayo ezivela kumyili waseJamani u-wolfgang proksch zidibanisa izinto ezahlukeneyo, kunye ne-caramel tortoiseshell texture frame kunye neengalo zentsimbi. Uyilo lwesakhelo lucebile ngobukhulu obuthathu, olulunge kakhulu kumantombazana anemfashini ane-myopia.
Njengentombazana ethanda ubuhle, ngaphandle kokusebenza, ifashoni ibaluleke kakhulu xa uthenga iiglasi, akunjalo? Ukuba uyavuma, ke ezi zinto zoyilo zokuhombisa zezakho nje! Uphawu lwamehlo lwezobugcisa oluvela eLondon luhlala lujolise kwiiglasi eziyimfashini kunye nezobugcisa. Isakhelo esincinci sensimbi yekati sihonjiswe ngeeperile ezintathu kumacala asekhohlo nasekunene, kwaye isitayile sithambile kakhulu. Ukongeza ngenxa yobugcisa, ngeli xesha lonyaka u-Alexander McQueen, Gucci, Chloe kunye nezinye iimveliso bazise iintlobo ngeentlobo zeefreyimu zoyilo,
Ukuzalwa kweiglasi ze-aviator kunxulumene ngokusondeleyo nabaqhubi beenqwelo moya. Ziigogo eziyilelwe yiBausch kunye neLomb Inkampani yabaqhubi beenqwelomoya ngokuchasene ne-stratosphere. Yamkela uyilo olumilbe i-teardrop kwaye yenziwa ngesakhelo sesinyithi engasindi. Ngokuchasene noyilo oluphezulu lwesakhelo seglasi yekati, ilensi yeeglasi zeAviator inoyilo lokujikisa kuwo omabini amacala, nto leyo eya kwenza abantu bagxile kwisiqingatha esisezantsi sobuso. Ke ngoko, ikwalungele ngakumbi amantombazana aneeshini ezibukhali, kwaye abo banobuso obufutshane nobubanzi kufuneka bazame konke okusemandleni ukuphepha.
Ixesha Post: Sep-07-2020